Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 9.9 milyan ah si loo ilaaliyo 1,179 guryo la awoodi karo - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 9.9 milyan ah si loo ilaaliyo 1,179 guryo la awoodi karo
Deeqaha iyo amaahdu waxay maalgeliyaan shaqooyinka 23 guryaha kirada ah ee qoysaska badan iyo mashaariicda hoyga ee gobolka oo dhan
OLYMPIA, WA - The Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington maanta ayaa shaaca ka qaaday $ 9.9 milyan oo deeq iyo amaah ah oo ka timid Sanduuqa Guryaha ee Guryaha (HTF) ee loogu talagalay 23 mashruucyada ilaalinta guryaha ee bulshooyinka ku nool Washington oo dhan. Eeg liiska oo dhameystiran.
Lacagtu waxay ilaalin doontaa 1,179 kiro qoysas badan iyo hoy hoy ah, oo 790 ka mid ah ay degi doonaan qoysaska hela 30 boqolkiiba ama ka yar dakhliga dhexdhexaadka ah ee aagga. Qiyaasta wadarta qarashka lagu dhammaystirayo howlaha ilaalinta waxay ka badan tahay $ 64 milyan, taasoo macnaheedu yahay in dowlad kasta oo doolar oo la maalgashado ay ka faa'iideysan doonto $ 5.4 dheeraad ah oo laga helo ilo kale. Wadashaqeynta maalgelinta lala yeesho kuwa gaarka loo leeyahay, kuwa dawliga ah, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo ururada bulshada ayaa xaqiijin doona dhameystirka mashaariicdan.
"Kaliya maahan inuu gobolkeenu ubaahan yahay unugyo cusub oo guriyaal la awoodi karo ah iyo guryo dheeri ah guud ahaan, waxaan u baahannahay inaan xusuusano in sanduuqeena 30-ka sano uu sii wado bixinta guryo aamin ah oo hufan oo loogu talagalay dadka ugu nugul," ayay tiri Diane Klontz, kaaliyaha agaasimaha ganacsiga adeegyada bulshada iyo guryeynta. “Laakiin waa gabowday waxayna u baahan tahay maalgashi joogto ah si ay unugyada jira uga sii hayaan qadka. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan barnaamijkaan ka dhigno mid joogto ah si dadkayaga ugu nugul ay u awoodaan inay ku nagaadaan guryahooda.
Ku dhowaad 70 boqolkiiba unugyada hadda ku jira sanduuqa sanduuqa sanduuqa ee 'Trust Fund' waxaa ku nool dad dakhligoodu aad u hooseeyo iyo baahiyo gaar ah.
Kal-fadhigii sharci-dejinta ee 2018, sharci-dajiyayaasha gobolku waxay u qoondeeyeen $ 10 milyan oo maalgelin tartan ah si loo ilaaliyo unugyada guryaha ee la awoodi karo ee sanduuqa Sanduuqa Amaanada Guriyeynta Markii la meelmariyey miisaaniyadda raasamaalka ee 2017-19 Janaayo 19, Ganacsigu wuxuu bilaabay hawsha qaabeynta barnaamijkan cusub ee maalgelinta. Bishii Abriil 2, 2018 Ogaysiiska Helitaanka Maalgelinta ayaa lagu dhawaaqay codsadayaashuna waxay haysteen illaa Juun 30, 2018 inay soo gudbiyaan codsi tixgelin ah. Ganacsigu wuxuu helay 38 codsi oo codsanaya qiyaastii $ 14 milyan si loo ilaaliyo 1520 unug oo ah guryo dakhligoodu hooseeyo oo ku baahsan gobolka oo dhan, iyadoo 867 ka mid ah unugyadaas ay degan yihiin qoysasku helaan 30% ama ka hooseeya dakhliga dhexdhexaadka ah ee aagga.
Xulista 23 abaalmarinood, shaqaalaha Sanduuqa Guriyeynta Trust waxay ka shaqeeyeen inay la jaanqaadaan heerka ugu sarreeya ee suurtagalka ah mudnaanta maxalliga ah, maalgeliyeyaasha dadweynaha ee magaalada iyo degmada, iyo barnaamijka Abaalmarinta Canshuuraha Guriyeynta Dakhliga Hoose ee Guddiga Washington ee Guriyeynta Gobolka.
Haddii sharci dejiyeyaasha 2019 ay u qoondeeyaan lacag HTF, Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta ee soo socota (NOFA) ayaa la dhajin doonaa marka la meelmariyo miisaaniyadda raasumaalka. Ganacsiga wuxuu ku daabici doonaa macluumaad dheeri ah website waxayna ku qaybin doontaa emayl markii la helo. Isqor liiska liistada boostada ee Sanduuqa Trust Trust.
guryo la awoodi karoDeeqaha bulshada iyo amaahdaWar-saxaafadeedXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Hay'adda Suuqgeynta Dalxiiska ayaa qabatay kulan bilow ah Ganacsiga Oo Qabtay Shirka Tababar Qaran →